साइकल चलाउने गर्नुहोस्, यस्ता छन् फाइदा ! - Laltin Media
Home»लाईफस्टाइल»साइकल चलाउने गर्नुहोस्, यस्ता छन् फाइदा !
साइकल चलाउने गर्नुहोस्, यस्ता छन् फाइदा !
By लाल्टिन डट कम June 5, 2022 No Comments2 Mins Read
फुर्सदको समयमा बिहान बेलुका मानिसहरुले साइकल चलाउने एकादेशको कथा भईसक्यो। आजकल त तरकारी किन्न देखि लिएर २ मिनटको बाटोमा पनि हामी मोटरबाइक आदिमा हिँड्ने गर्छौँ । तर, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने साइकल चलाउनु स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक कुरा हो । यो अभाव या गरिबीको लक्षण होइन ।
दैनिक कम्तिमा पनि २० मिनेट साइक्लिङ गर्दा मानिस पूर्ण रूपमा स्वस्थ रहने एक अध्ययनले जनाएको छ। साइक्लिङ जुनसुकै उमेर समुहका मानिसका लागि पनि उपयुक्त व्यायाम भएको विशेषज्ञहरु बताउँछन्।
नियमित साइकल चलाउनुका फाइदा यस प्रकार छन्:
नियमित साइकल चलाउँदा शरीरमा रक्तसञ्चार राम्ररी हुन्छ। साइक्लिङले रगतमा अक्सिजनको मात्रा आपूर्ति हुने भएकाले रक्तसञ्चारमा सुधार आउँछ। त्यस्तै, साइकल इन्धनविना चल्ने भएकाले प्रदूषणबाट समेत बच्न सकिन्छ।
साइक्लिङ गर्नु सजिलो एक्सरसाइज हो । जसले जोर्नीमा लचकता ल्याउँछ। नियमित साइक्लिङ गर्दा मांसपेशी बलियो बनाउन मद्दत पुग्छ। साइकल चलाउँदा पछिल्तिरका हड्डी सक्रिय रहने हुनाले ढाड र गर्दनको दुखाइबाट समेत राहत पाउन सकिन्छ।
दैनिक करिब २० मिनेट साइक्लिङ गर्दा शरीरमा हजार क्यालोरी खपत हुन्छ। त्यसैले, साइक्लिङ गर्नेले बढी क्यालोरीयुक्त खाना खाँदा पनि केही फरक पर्दैन। यसरी सहजै व्यवस्थापन हुने हुँदा आफूलाई मन परेको खाना मज्जाले खान सकिन्छ। यसबाहेक, मोटोपन भएका व्यक्तिले साइक्लिङ गरेमा अन्य व्यायाम गर्नुपर्दैन।
अमेरिकास्थित इलिनोइस विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले गरेको अध्ययनले स्वच्छ वातावरणमा नियमित साइक्लिङ गर्ने व्यक्तिमा अरूको तुलनामा दिमागी शक्ति बढी हुने देखाएको छ। साइकल चलाउँदा शरीरमा ब्रेन सेल (न्युरोन) को निर्माण हुने बताइन्छ।